Umdwebo we-Maxi Long Sleeve Turtleneck | Ama-Buddhatrends
ujabulele ukuletha kwamahhala emhlabeni jikelele kuwo wonke ama-oda, akukho okungenani okudingekayo!
Thenga isikweletu se-Google Play
Izingubo eziphefumulelwe zethusi
Ama-Dresses we-Size ngaphezulu
Ama-Overalls Over Size
Zonke izindawo eziphezulu
Ama-Blouses & Shirts
Izindwangu kanye nama-Pullovers
Amafulethi & ama-Loafers
Zonke Izambatho Zama-Plus
Amathrekhi we-Plus ngaphezulu
Ukukhishwa kwamahhala emhlabeni jikelele
Ibuyisa & Exchange
I-Cart yakho ayinalutho
$ 0.00 Inani eliphansi
Ama-Floral & Prints Dresses
Izingubo eziphefumulelwe zendalo
Izingubo zikaBoho Chic
Izingubo Zen Zen
Izembatho eziphefumulelwe zase-Asia
Izigqoko ZamaKnee Length
Thenga nge Sleeve
Izigqoko Zemijaho Ede
Izingubo Zemizuzu Emifushane
Izigqoko ezimnyama nezimhlophe
Izingubo ezimhlophe zeBlue & White
Engeza incazelo, izithombe, amamenyu kanye nezixhumanisi kwimenyu yakho ye-mega
Ikholomu engenamasethingi angasetshenziswa njenge-spacer
Xhuma kumaqoqo akho, ukuthengisa ngisho nezixhumanisi zangaphandle
Engeza amakholomu amahlanu
I-Long Sleeve Turtleneck Sweater Dress
Ngazise uma lo mkhiqizo utholakala:
I-Army Green / M I-Army Green / L I-Army Green / i-XL I-Army Green / XXL I-Navy Blue / M I-Navy Blue / L I-Navy Blue / XL I-Navy Blue / XXL Grey / M Grey / L Grey / XL Grey / XXL Okumnyama / M Omnyama / L Okumnyama / i-XL Black / XXL
Isiqeshana esilula kunoma yiluphi usuku oluhlelekile, le Dress Long Malee Turtleneck Maxi ikhululekile futhi inesikhathi eside ngokwanele ukuba igqoke eyedwa noma nge leggings eziqinile.
Imikhono emide ingafakwa ngokubukeka okungavamile noma ngesikhathi sokushisa okushisayo. Ibuye ibe ne-turtleneck collar ephelele kwabesifazane abathanda izingubo ezifanele zokugqoka ezinama-necklines angaguquki. Ukuhlela ekugqokeni amafulethi noma izimbadada usuku lonke? Le ngubo ehambisana nokusebenza yayizosebenza nalokhu.
Futhi itholakala ku-Black, Navy neGrey.
Material: Ukotini kanye ne-Linen
Uhlobo lwephethini: Solid
Nazi izilinganiso zereferensi yakho:
Ukulethwa kwamahhala emhlabeni jikelele kuwo wonke ama-oda. Akukho okungenani okudingekayo.
Senza amakhasimende ethu abe nezinsuku ze-30 izinsuku zokubuyisa noma ukubuyisela iwaranti. Ikuvumela ukuthi uthenge izinto ngesimo sengqondo esingakhathazeki futhi ube nesipiliyoni esimangalisayo sokuthengwa ku-Buddhatrends.
Ufuna ukuba ngowokuqala ukwazi ngezaphulelo, ukukhishwa okusha nokuningi?
Bhalisela iphephandaba lethu manje! Faka ikheli lakho le-e-mail ngezansi.
Ibuyisela & ukubuyiselwa imali
© 2018 Ama-Buddhatrends. Wonke Amalungelo Agodliwe